Atom 1.0 inowanikwa kurodha pasi | Kubva kuLinux
Ndanga ndichishandisa kwenguva yakati rebei kushanda se kumagumo vaviri vakakurumbira zvinyorwa edhita, ndiri kureva Sublime Text y akaisa zvikomberedzo, yekupedzisira iri iyo yandinoshandisa nekutadza.
Panguva iyoyo, iye akange aedza shanduro dzakapfuura dze atomu uye haana kumbondigutsa. Yakanga ichinonoka, kodhi yayo auto-kupedzisa yaive isingashande uye yaishaya sarudzo zhinji, zvisinei, ine vhezheni 1.0, inowanikwa mazuva mashoma apfuura, iyo nzvimbo yachinja zvakanyanya.
1 Chii chinotitorera Atom?
2 Atom kugadzirisa kuita zvizere
3 Isa Atomu
Chii chinotitorera Atom?
Sezvandambotaura, chimwe chezvinhu zvakandinetsa zvakanyanya pamusoro peshanduro dzakapfuura dzeAtom yaive yakasuruvara uye yakashata kodhi yekupedzisa auto, asi iyi vhezheni yakavandudza zvakanyanya nekuda autocomplete-plus, iyo inouya yakaiswa sepakeji.
Mamwe mapakeji akasanganiswa uye anoita kuti Atomu ive yakasimba mupepeti ane enda-kuwedzera, kusimudzira mutauro wakagadzirwa neGoogle, atomu-typescript nerutsigiro ruzere rweTypeScritp, Microsoft yemahara programming mutauro uye omnisharp-atomu, yeC # uye .Net.
Atom kugadzirisa kuita zvizere
Mukuda kweAtomu tinowana yakawanda sarudzo yekuzvigadzirisa zvinoenderana nezvatinoda uye zvatinoda, uye isu tine zvinopfuura 600 madingindira (aka matehwe) kusarudza kubva, uye kupfuura 2000 mapaketi kuwedzera mashandiro ayo.
MuAtom 1.0 yakawanda yezvimwe zvinhu zvinotonhorera zvakawedzerwa senge system browser faira, kutsvaga nekukurumidza Fuzzy-tsvaga, akawanda akasarudzika mapaneru uye makatuka, snippets, Markdown rutsigiro, uye nezvimwe, zvimwe zvakawanda ..
Chinhu chinoshamisa pane zvese izvi ndechekuti mashandiro echishandiso akagadziridzwa zvakanyanya, pamwe nemhinduro yadzo pakunyora zvinyorwa.
akaisa zvikomberedzo ichiri kwandiri sarudzo iri nani yebasa seFirstEnd. Kungoita nekutadza sarudzo yekuona mavara kana iwe ukaisa iyo inotora pane yeCSS chivakwa, kana mufananidzo kana iwe ukaisa iyo inoturika munzira, zvinoita kuti basa rive nyore.
Nekudaro, ini ndichapa Atom kuyedza uye inogona kuwana kwakawanda kushanda nekushandisa kwayo.
Kana tikashandisa ArchLinux, tinogona kuisa Atomu kubva kuAUR:
Kana isu tikashandisa .deb kana .rpm kugoverwa, tinogona kurodha mabinari zvakananga kubva kune Atom saiti Ehe, iwo akarongedzerwa makumi matanhatu nemasere.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Atom 1.0 inowanikwa kurodha pasi
Ndatenda neruzivo. Ndiri kuenda kunoongorora maatomu kuti ndione kuti chii, nekuti ini ndichatanga kosi uye nekuisa visual studio kodhi uye ndione iyo yandinogadzikana nayo.
Zvakanaka, ndinofunga uchaita zvirinani neAtom .. asi ini handizive, iwe unofanirwa kuedza 😀
Mhoroi, ndamboishandisawo kwenguva yakareba uye ndaifarira zvakanyanya, asi yaive nehurema (mumaonero angu) uye yaive yekuti haina kuchengetedza nzvimbo yekushandira kana magwaro akavhurika, unoziva kana izvo zvachinja?
Zvakanaka zvinoita sekunge vakagadzirisa ...
Ndatenda, ndichaedza zvekare 🙂
Kutenda Elav nezano racho, ini ndaizokuudza kuti Atomu ndiri kurishandisa kakawanda kupfuura isinganzwisisike Sublime Chinyorwa. Mabhureki Ini handina kuapa iwo yakawanda mukana, ini ndine pfungwa inorema, uye Atomu yakavandudza zvakanyanya mune izvo.
Mabhureki anonzwa kunonoka dzimwe nguva, kunyanya kana iwe ukaisa mamwe ekuwedzera pairi, asi haina kurema .. chokwadi, Atom uye Sublime inomhanya nekukurumidza, pamwe nekuti Mabhureki akavakirwa paWebhu tekinoroji.
Atomu rakavakirwa pamagetsi (https://github.com/atom/electron) iyo sezvandinonzwisisa ndeyewebhu tekinoroji 🙂. Mufaro
Zvakanaka, ini handinzwisise saka mabhureki anononoka sei kuvhura kana ane matambudziko ekuvhara uye Atom haina 🙁
Kunyangwe ichi chiri mutauro wemitauro yakawanda, ye GO, ini ndinoshandisa LiteIDE + Godoc. ENDA kodhi yekugadzirisa pamwe nekuzadzisa. Chete kweGo (kana Golang yekutsvaga).
Lightweight uye yeLinux, Windows uye BSD.
Zviripachena nekuumbwa, kukanganisa, kuuraya, nezvimwe.
Iyo haina graphic interface dhizaini, kunyange iwe uine zvese zviri zviviri webhu uye maraibhurari eko.
Fernando Gonzalez muchengeti wemufananidzo akadaro
Zvingave zvakanaka kana iwe ukatisiira chinongedzo kana rairo kune mamwe maGNU / Linux distros anga asiri Arch Linux chete, handiti? chinyorwa ichi chinotaridzika zvakanaka. ndatenda.
Pindura Fernando Gonzalez
Pane iyo webhusaiti https://atom.io/ ona izvo zvinotsanangura maitiro ekuzviisa pane mamwe mapuratifomu 😉
Ndizvozvo, zvakare mune yekupedzisira link yeiyo post kune ese aripo mabhinari.
MuGentoo uye zvigadzirwa zvakagadzirwa kubva pakufukidza kwangu 😀 https://github.com/jorgicio/jorgicio-gentoo
Zvakanaka, ndanga ndichitarisira kuti ungade iyo GO mutauro, shanduko diki yeC, kwete c ++.
Ah, haisi godoc, ndeye gocode. Kukanganisa kwangu.
Ndine urombo, mupepeti uye kwete mutauro.
Gonzalo ruiz akadaro
Ndinoyeuka ndichiisa Atom asi yaidya zviwanikwa zvakawanda, zvakatora nguva yakareba kuti zvishande, kana mumwe munhu akambozviedza, taura chiitiko.
Pindura Gonzalo Ruiz
Ndakaiisa nezuro ... ndanga ndichida iyo yekupedzisira vhezheni kuti ibude kwenguva yakareba kuti ndikwanise kutsiva Sublime Chinyorwa 2 kamwechete ... Nezuro ndakaita shanduko, ndakaisa mamwe mapulagini senge Vaka uye Gonesa -mutsetse uye Ndiri kufara :).
Ndakaedza Atomu ndikaona fananidzo pakati peiyo uye Sublime Chinyorwa. Ichokwadi, ini handina kuwana chikonzero chekuwandisa dhisiki dhisiki, kunyangwe ichikurumidza. Sublime Rugwaro harupedze anopfuura makumi maviri MB. Kunze kwezvo, ini handina kuwana chimwe chinhu kuArduino yeAtomu (yeiyo Sublime Chinyorwa, pane Stino, kuumbiridza zvirongwa zveArduino nekuishandisa seIDE). Saka ikozvino, ini ndinopfuura. Asi zvinoongwa.
Heino .deb yandakagadzirira i386:
ndeyezvikwata zvine arq ... 86 ?? Mufaro
Izvo ndezve 32-bit makomputa ...
Pamwe mubvunzo wandichakubvunza unoratidzika kunge unoshamisa, asi unoziva here kana paine chinyorwa chemavara chinogona kugadzirirwa nenzira yekuti chinosiya muganho kuruboshwe usati wanyora?
Kutenda mberi. Ndakazvitsvaga asi handina kuzviwana.
Ini ndinoramba ndakanamatira nemaBrakets, sekutaura kwaElav, kuona iwo mavara muCSS pamwe nemifananidzo inondiponesa yakawanda, yakawanda basa.
chero munhu ane iyo rpm yeI386?
unogona kundisiya ndinobatanidza ndichave ndinotenda
Pindura kuna adolfo
Iwo mavara anogona kuoneka nekuisa pigments.